သဒ္ဒါနှင့်ပါတ်သက်သော မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ (အပိုင်း ၂) - Myanmar Network
သဒ္ဒါနှင့်ပါတ်သက်သော မေးခွန်းများနှင့်အဖြေများ (အပိုင်း ၂)
Posted by Soe Soe Win on February 3, 2014 at 14:15 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အခု တင်ပြသွားမှာကတော့ Oxford University Press ဝဘ်ဆိုက် မှ "Grammar to Go" သင်ခန်းစာ စာအုပ်ကို ဖတ်သူများမှ မေးမြန်းထားသည့် မေးခွန်းအချို့ရဲ့ ဖြေကြားချက်များအား Rachel Godfrey မှပြန်လည်ဖြေကြားထားသည်များကို ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
5. Balaton ကန်လား (သို့) the Balaton ပဲလား (Lake Balaton or the Balaton?)
ဒီမေးခွန်းကတော့ Grammar to Go ဖတ်သူတစ်ဦးက ဟန်ဂေရီ (Hungary) နိုင်ငံရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ရေကန်ကြီးကို အင်္ဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေသအရဆိုရင်တော့ Lake Balaton လို့ပဲ ခေါ်ရပါမယ်။ The Balaton လို့ မခေါ်ရပါ။ the ကို ပင်လယ်နဲ့ သမုဒ္ဒရာနာမည်တွေရှေ့မှာပဲ သုံးရပါမယ်။
the Atlantic (အတ္တလန်တစ် သမုဒ္ဒရာ)
the North Sea (မြောက်ပိုင်းပင်လယ်)
the Pacific Ocean (ပစ်စစ်ဖစ် သမုဒ္ဒရာ)
the South China Sea (တောင်တရုတ်ပင်လယ်)
ရေကန်ကြီးတွေရဲ့ နာမည်ရှေ့မှာ (the) ကို မထည့်ရပါ။
Lake Michigan (မီချီဂန်ကန်)
Lake Superior (ဆူပီးရီးယားကန်)
Lake Baikal (ဘိုင်ကယ်(လ)ကန်
6. နေ့ဒီလိုအချိန်မှာ / လရဲ့ ဒီလိုအချိန်မှာ (at this time of (the) day/ at this time of (the) month.
at this time of ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ morning/ evening နှင့် month တို့ကို တွဲရင် of ရဲ့နောက်မှာ the ကို အမြဲထည့် သုံးရပါတယ်။
I always feel tired at this time of the morning / the afternoon / The month (မနက်/နေ့လည်/ လရဲ့ ဒီလိုအချိန်ဆိုရင် အမြဲပဲ ပင်ပန်းတယ်။)
ဒီအသုံးနှုန်းကိုပဲ day,night နှင့် year တို့နှင့် တွဲသုံးတဲ့အခါမှာတော့ (the ) ကို ဖြုတ်ထားခဲ့နိုင် ပါတယ်။
I always feel good at this time of the day /the night/the year. လို့ ပြောမဲ့အစား
I always feel good at this time of day/night/ year. ဟု ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲ? ဒါကတော့ သဒ္ဒါထက်ဝေါဟာရနဲ့ ဆိုင်တဲ့ပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။ at this time of the ကို အချိန်ကာလရဲ့ လည်ပတ်မှုနှင့် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အခါ အသုံးပြုပါတယ်။ Day,night နဲ့ year တို့မှာကြတော့ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုနှင့် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တို့အပြင် စိတ်ခံစားချက် ဆက်နွယ်မှုတွေပါနေတဲ့အတွက် (the) ကို ထည့်မသုံးပါ။
It's so quiet and still at this time of night . (ည ဒီလိုအချိန်မျိုးဟာ အလွန်တိတ်ဆိတ်ပြီး ငြိမ်သက် နေပါတယ်။
I often think of my grandfather at this time of year. (နှစ်ရဲ့ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ အဖိုးအကြောင်း မကြာခဏ စဉ်းစားမိတယ်။)
I love looking at the sky at this time of day. (နေ့ရဲ့ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကောင်းကင်ကြီးကို ကြည့်ရတာကို နှစ်သက်တယ်။)
7. ကျွန်ုပ် အနှစ်သက်ဆုံး ရေတွက်၍ ရသော အရာများ (countable things)နှင့် ရေတွက်၍ မရသော အရာများ (uncountable things) အကြောင်း ဘယ်လို ပြောရပါသလဲ? (How do I talk about my favourite countable and uncountable things?)
ကျွန်ပ်တို့ရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံး အရာတွေအကြောင်း ပြောရတာကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။
My favourite animals are dogs. (plural countable + plural countable noun -ပုံစံ) (ကျွန်ုပ် အနှစ် သက်ဆုံး တိရစ္ဆာန်တွေကတော့ ခွေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။)
My favourite food is chicken. (uncountable noun+uncountable noun ပုံ) (ကျွန်ုပ် အနှစ်သက်ဆုံး အစားအစာကတော့ ကြက်သားဖြစ်ပါတယ်။)
ဒါပေမယ့်လည်း ၀ါကျတစ်ကြောင်းတည်းမှာပဲ countable နှင့် uncountable noun တို့ကိုရော ရေးဖို့ လိုအပ်လာရင်တော့ ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။
My favourite fruit is apples ( uncountable noun + plural countable noun - ပုံစံ ) (ကျွန်ပ်အနှစ်သက်ဆုံး သစ်သီးကတော့ ပန်းသီးများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။)
ဒီလိုဝါကျကိုကြည့်ရင် ထူးဆန်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် လုံးဝ မှန်နေပါတယ်။ကြိယာ (be) ဟာ ရှေ့က ကတ္တား (subject) ဖြစ်တဲ့ fruit နဲ့ ညီညွတ် (agree) ရမှာ ဖြစ်ပြီး ဖြည့်ဘက် (complement) ဖြစ်တဲ့ apples ကတော့ အများကိန်း (plural) ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
My favourite fruit isacrisp green apple. (uncountable noun + singular countable noun) (ကျွန်ပ်ရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံး သစ်သီးကတော့ ကျွတ်ရွပြီး စိမ်းနေတဲ့ ပန်းသီးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။)
ဒီလိုဝါကျမှာတော့ ရေတွက်လို့ရတဲ့ အနည်းကိန်းနမ်ကို သုံးထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ အရာ ၀တ္ထုတွေရဲ့ အမျိုးအစား (apples in general) အကြောင်းထက် နှစ်သက်တဲ့အရာ (a crisp green apple) တစ်ခုတည်းအကြောင်းကို တိတိကျကျ ပြောလိုတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
8. လိုက်ကာတွေဟာ အညိုရောင်(သို့) လိုက်ကာတွေဟာ အညိုရောင် တစ်မျိုးဖြစ်တယ် လို့ပြောရမှာ ဖြစ်ပါလား? (Do we say the curtains are of brown colour or the curtains are ofabrown colour?
Colour (အရောင်)ကို ရေတွက်လို့ရတဲ့ (countable) နာမ်အနေနှင့်ရော ရေတွက်လို့မရတဲ့ (uncountable) နာမ်အနေနှင့်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
That shirt will lose much of its colour when you wash it. (အဲဒီရှပ်အင်္ကျီကို လျှော်တဲ့အခါ အရောင် များကြီး ကျွတ်သွားနိုင်ပါတယ်။) ဒီနေရာမှာ colour ကို uncountable noun အဖြစ် အသုံးပြုထားပါတယ်။
How many colours are there in the rainbow? (သက်တန့်မှာ အရောင်ဘယ်နှစ်မျိုး ပါပါသလဲ?)
ဒီဝါကျမှာတော့ colours ကို countable noun အနေနဲ့ အသုံးပြုထားပါတယ်။ လိုက်ကာရဲ့အရောင်နဲ့ ပါက်သက်တဲ့ ၀ါကျမှာတော့ colour ကို countable noun အနေနဲ့သုံးထားတဲ့ အတွက် အောက်တွင် ဖော်ပြထားတဲ့ ၀ါကျက အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။
The curtains are (of)abrown colour. (လိုက်ကာတွေဟာ အညိုရောင်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။)
(of) a--- colour ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကိုတော့ ကိုယ်ပြောလိုတဲ့ အရောင်အတွက် တိကျတဲ့စကားလုံး ရှာမတွေ့တဲ့အခါမှာ သုံးပါတယ်။ (of) ကတော့ ခန့်တဲ့ပုံစံ (formal) ပေါက်နေတဲ့အတွက် ၄င်းကို ဖြုတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
နောက်ထပ် ဥပမာများကို ဖေါ်ပြလိုက်ရပါတယ်။
The sky wasapinkish-red colour. (ကောင်းကင်ကြီးဟာ ပန်းနုရောင် ပြေးနေတဲ့ အနီရောင် တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။)
Her eyes areagreeny-gray colour. (သူမရဲ့ မျက်လုံးတွေဟာ စိမ်းဖန့်ဖန့်အညိုရောင် တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။)
9. Something နှင့် anything နှိုင်းယှဉ်မှု။ စားပွဲတစ်ခုအောက်ကို ငုံ့ကြည့်နေတဲ့သူ တစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုမေးခွန်း မေးမလဲ? တစ်စုံတစ်ရာ ပျောက်နေပါလား? (သို့) ဘာတစ်ခုခု ပျောက်နေပါသလဲ?
(Something V anything: What do you ask someone who's looking underatable? Have you lost something? or Have you lost anything?)
နာမ်စားများ ဖြစ်ကြတဲ့ something နဲ့ anything တို့ဟာလည်း some နှင့် any တို့ လိုက်နာတဲ့ စည်းကမ်းတွေကိုပဲ လိုက်နာကြပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် some ကို အတည်ပြုဝါကျ (positive sentences) တွေမှာသုံးပြီး any ကိုတော့ အငြင်းဝါကျ (negative sentences) တွေနဲ့ အမေးဝါကျ (questions) တွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
သတိပြုရမှာကတော့ some ကို ယဉ်ကျေးတဲ့ တောင်းဆိုချက်များ (polite requests) နှင့် ယဉ်ကျေးတဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်များ (polite offers)ကို ဖေါ်ပြတဲ့ မေးခွန်းတွေမှာ အသုံးပြုတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကိုပါပဲ။
Could I have some paper? (စာရွက်အနည်းငယ်လောက် ရနိုင်ပါမလား?)
Would you like some juice? (အချိုရည်သုံးဆောင်ပါမလား?)
Yes (ဟုတ်ပါတယ်) ဆိုတဲ့အဖြေကို မျှော်လင့်ထားတဲ့ မေးခွန်းတွေမှာလည်း some ကို သုံးပါတယ်။
Are there some children in the garden. I can hear voices. (ပန်းခြံထဲမှာ ခလေး တစ်ချို့ ရှိနေပါသလား? အသံတွေကြားနေရတယ်)
ဒါကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်က စားပွဲအောက်ကို ငုံ့ကြည့်နေတယ် ဆိုရင်တော့ ထိုသူဟာ တစ်စုံတစ်ရာ ကို ရှာနေတာပဲဆိုတာကို မှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ မေးရမယ့် မေးခွန်းအမှန်ကတော့-
Why are you looking under the table? Have you lost something? ဘာကြောင့်စာပွဲအောက်ကို ငုံ့ကြည့်နေတာလဲ? တစ်စုံတစ်ရာပျောက်သွားလို့လား?
Have you got something in your hand?(= I think I can see you've got something in your hand. (ခင်ဗျားလက်ထဲမှာ တစ်ခုခုရှိနေပါသလား?)
ဆိုလိုတာကတော့ - ခင်ဗျားလက်ထဲမှာ တစ်ခုခုရှိနေတာကို တွေ့နေရတယ် ထင်ပါတယ်။)
Did you just say something. (= I think you just said something.) (အခုလေးတင် ခင်ဗျားတစ်ခုခု ပြောလိုက်ပါသလား?)
ဆိုလိုတာကတော့ ခင်ဗျားအခုလေးတင် တစ်ခုခုကို ပြောလိုက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
နားလည်သလို ပြန်ပြောခြင်းနှင့် ထပ်တူလိုက်ပြောခြင်း (Paraphrasing and...
Permalink Reply by zawzawhtway on February 7, 2014 at 15:49